Soo-saareyaasha mashiinka wiishka sare - Shiinaha Shirkado & Warshad bamka wiishka sare
Bamka wiishka sare 80ZGB
Bamka wiishka sare 100ZGB
Bamka abrasion ee adag 100DXD
Bamka abrasionka adag 200STXD
Bamka abrasionka adag 300STXD
Astaamaha farsamooyinka waaweyn iyo codsiyada: Habka naqshadeynta casriga ah ee CAD, wuxuu leeyahay waxqabad heer sare ah, hufnaan sare iyo sicir hooseeya. Marinka socodka waa karti leh, waxqabadka ka hortagga xannibaadda waa wanaagsan yahay, waxqabadka daaqa ayaa ka sarreeya; Khatarta isku dhafan iyo shaabadda farsamada leh qalabka wax lagu kiciyo iyo xirxirashada ayaa la ansaxiyay si loo hubiyo in uusan daadin daadashada. Naqshadaynta kalsoonidu waxay xaqiijineysaa in celceliska waqtiga shaqada ee aan qalad lahayn (MTBF) ee mashiinka oo dhan si weyn loo hagaajiyay. Isticmaal saliid naadir ah ...
Bamka wiishka sare 300ZGB